HomeWararka CiyaarahaThomas Tuchel oo Shaaciyey in mid ka mid ah xiddigaha kooxdiisu uu iska diiday inuu ciyaaro kulankii finalka FA Cup ee Liverpool
Tababaraha kooxda kubadd cagta Chelsea ee Thomas Tuchel ayaa shaaciyey in mid ka mid ah xiddigaha kooxdiisu uu iska diiday inuu ciyaaro kulankii finalka FA Cup ee Liverpool ay Sabtidii rikoodheyaasha kaga qaadday, taasina keentay inuu ka saaro liiskiisa inkasta oo uu garoonka joogay oo uu sameeyey iskululaynta ka hor ciyarta.
Thomas Tuchel ayay kooxdiisu bandhig fiican samaysay, waxaase lagu garaacay rikoodheyaal 6-5 ah oo ay Liverpool koobka ku qaadday, iyadoo Cesar Azpilicueta iyo Mason Mount ay rikoodheyaasha ka khasaariyeen, halka Liverpool na uu Sadio Mane uu khasaariyey rikoodhihiisii.
Thomas Tuchel ayaa sheegay, in uu layaab ku dhacay ka hor ciyaarta markii uu ogaaday in difaaca dhexe ee Andreas Christensen aanu diyaar u ahayn in uu ciyaaro, isla markaana aanu doonayn in lagu daro liiska kooxda ee ciyaarta kusoo bilaabanaysa, taas oo keentay inuu kusoo bilaabo Trevoh Chalobah.
Difaaca reer Denmark oo qandaraaskiisa Chelsea uu ku egyahay dhamaadka xilli ciyaareedkan ayaa ka badheedhay go’aan adag oo ah in aanu ciyaarin maadaama uu kasii tegayo Blues, waxaana Tuchel oo warbaahinta la hadlay uu yidhi: “Waxa aanu luminaynaa oo naga tegaya Toni (Antonio Rudiger), waxa sidoo kale naga tegaya Andreas, waa arrin adag.”
Intaas kaddib ayaa la weydiiyey sababta uu Andreas Christensen u ciyaarsiin waayey, waxaanu ku jawaabay: “Isaga ayaan diyaar u ahayn in uu ciyaaro.”
Christensen ayaa la rumaysan yahay in uu mar horeba heshiis la gaadhay PSG oo uu si xor ah ugu wareegi doono, halka Antonio Rudiger uu isaguna mar horeba heshiis la gaadhay Real Madrid oo uu dhowaan ka degi doono Santiago Bernabeu.